ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Game Creation Training (Fourth Batch) ကို တက်ရောက်လိုသူ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ (MWC Lib)တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
1. Character Creation and 3D Animation Training
2. AutoCAD Training
3. Game Development Training
-ဝင်ခွင့်အတွက် IQ Test ဖြေဆိုရမည်။
-ကိုယ်ပိုင် Product ထုတ်နိုင်သည်အထိသင်ကြားပေးမည်။
-Final Game ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရသောအဖွဲ့အား Game Product အဖြစ်ထုတ်ပေးမည်။
-သင်တန်းကာလမှာ (၁၀-၅-၂၀၁၉) မှ ကျောင်းဖွင့်သည်အထိဖြစ်သည်။
-သင်တန်းအချိန်မှာ(တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ) နံနက် ၉:ဝဝ နာရီမှ ညနေ ၃:၃၀ ထိဖြစ်သည်။အဆောင်နေလိုသူများကိုစီစဉ်ပေးမည်။
အခြားသိရှိလိုပါက MWC Lab တွင် အသေးစိတ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Application Form ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။
Source: University of Computer Studies, Yangon
More in this category: « “မိမိတို့ကလေးသူငယ်များကို အလွယ်တကူ ပညာရေးစိတ်ပါလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”	“တက္ကသိ်ုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်းနှင့် အောင်လက်မှတ်ထုတ်သည့်ရုံးနေရာကို ပါရမီလမ်းပေါ်ရှိ ရုံးသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့” »
“နိုင်ငံတကာကျောင်းများမှ အခြေခံပညာကျောင်း ပြောင်းရွှေ့လိုသူများ မေလ(၆) ရက်နေ့တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်”